Izixhobo Zokubandakanya iGreyidi, Umxokelelwane weTrack, iiNxalenye ezingekho seTyala- Inyaniso yeGlobe
I-Bolt kunye namantongomane
Ukusekwa ukusukela ngo-1998, iXiamen global ukweli (GT) Imizi-mveliso igxile kwimizi-mveliso yaseBulldozer & Excavator. Ngaphezulu kwe-35,000 yeekhilomitha zefektri yomzi-mveliso kunye nendawo yokugcina iimpahla eQANANHH, CHINA. Umzi-mveliso wethu uvelisa iinxalenye zokuqhuba ezingekho phantsi komatshini ezifana ne-track roller, i-roller roller, ithrekhi yomkhondo, idler yangaphambili, isprocket, umkhondo we-adjuster njl.
Amanye amalungu anje nge-track bolt / nati, isihlangu somkhondo, umkhondo we-track track bushing, ibhakethi, iphini yebhakethi, ibhakethi yebhakethi, amazinyo enziwe ngebhakethi, i-adapta yebhakethi, isando sokuqhekeza, iirayutshi, umatshini wokushicilela umkhondo, ukulandelela irabha, ipali yerabha, iinjini zenjini, blade, umda wokusika, iinxalenye zeembatyana ezincinci njl.
I-6Y3519, i-6Y3531, isiqhelo ...
Yakha iqela leqela le-S ...
I-JCB ephezulu i-roller carriers roll ...
Thengisa ukucanda i-E320L recoil ...
umgubhi wezixhobo zemigodi ...
Ishumi leminyaka SH60 SH100 SH120 t ...
Iqela lecandelo le-Bulldoze D155 D85 D6D D7G D5 D65 ...
Isisulu sokudubula intsholongwane enye yeetoni ezingama-20 ...
Thengisa i-O&K dozer RH20 itrack roller oem no.04 ...
Ibakala 8.8 ukuya ku-12,9 isikali kunye nebolt, i-nati kunye ne-bolt ...
Iminyaka engama-22+ kwaye yomelele
Ngaphezulu kwe-35,000 yeenyawo zeekhilomitha zomzi-mveliso nendawo yokugcina iimpahla eQANANHH, CHINA. Umzi-mveliso wethu uvelisa iinxalenye zokuqhuba ezingekho phantsi komatshini ezifana ne-track roller, i-roller roller, ithrekhi yomkhondo, idler yangaphambili, isprocket, umkhondo we-adjuster njl. Amanye amalungu anje nge-track bolt / nati, isihlangu somkhondo, umkhondo we-track track bushing, ibhakethi, iphini yebhakethi, ibhakethi yebhakethi, amazinyo enziwe ngebhakethi, i-adapta yebhakethi, isando sokuqhekeza, iirayutshi, umatshini wokushicilela umkhondo, ukulandelela irabha, ipali yerabha, iinjini zenjini, blade, umda wokusika, iinxalenye zeembatyana ezincinci njl.